Abbaan qabeenyaa kilaba Sheefiild Yunaayitid maatii Bin Laadiin waliin bizinasii hojjachuuf jedhu - BBC News Afaan Oromoo
Abbaan qabeenyaa kilaba Sheefiild Yunaayitid maatii Bin Laadiin waliin bizinasii hojjachuuf jedhu
20 Fuulbana 2019
Goodayyaa suuraa Kiriis Wiildar al lama qofa sodaa isaanii abboota qabeenyaaf akka ibsan himaniiru
Abbaan qabeenyaa garee kubbaa miilaa Sheefiild Yuunaayitid, Ilma mootii Sawudii kan ta'e Abdallaan, maatii Bin Laadiin waliin hojii daldalaarratti akka hirmaachuu akka barbaadu dubbateera. Abbaan qabeenyaa kun itti dabalaanis maqaan kun "maqaa badaa mitis" jedhaniiru.
Warri Sawudii erga abbaan qabeenyaa duraanii Keeviin Mckeeb ga'ee isaanii keessaa %50 gurguruuf mana murtiin doirqisiifamanii booda ture kan kilabicha bitan.
Deggeraa umurii guutuu Sheefild kan ta'e Mckeeb, ilmi mootichaa abdallaan namni amma kilabicha bulchuudhaaf "mijatoo" ta'uu gaafata.
Icciitiin obbolaan durbaa Sawudii Ameerikaatti du'anii maali laata?
Ta'us garuu abbaan qabeenyaa haaraan kun "hamma eegamu ol" nama kilabicha bulchuu danda'aniidha jedhaniiru.
Ilmi mootichaa maqaan guutuu isaa Abdallaa Bin Mosaad Bin Abdulaziiz akka jedhetti, garee Pirmeer Liigii kana gurguruu akka hin barbaanne himaniiru.
"Maallaqni waan dhiibbaa guddaa qabaatudha garuu osooo dhimmichi waa'eedhuma maallaqaati ta'ee ammuma kanan kilabicha gurgura ture," jedhan miseesni maatii mootichaa Sawud Arabiyaa.
"Kaayyoon kiyya ispoonsaroota Sawudiirraa as fiduudha."
Maatiin Bin Laadiin Sawudii keessatti maatii seektar konsitiraakishinii keessatti qabeenyaa guddaa horatan yoo ta'an, kanaan duras kilabicha bituudhaaf fedhii qabu turan jedhaniiru.
"Yeroo namoonni maqaa maatii Bin Laadiin karaa gaarii hin taaneen dhahan natti hin tolu. Maatii hunduu ijoollee keessaa nama gaarii hin taane tokko qabaachuu danda'a garuu isaan maatii baay'ee namaaf kabaja qabaniidha.
"Kanaan duraa isaan waliin hojii bizinasii hojjadhee hin beeku garuu amma isaan waliin hojjachuuf qophiidha. Maatiin Bin Laadiin maatii salphoo ykn waanta ani dhoksuun barbaachisu miti.
"Isaan gahee Keeviin Mckeeb bituu barbaanaii turan. Kanas sababa fedhii isaan hojiif kabaja qaban irraa ture garuu hin bitanne. Waan guddaa godhee hin ilaalu. Yeroo maqaan maatii Bin Laadiin as maqaa gadheetti kaasan nati hin tolu."
Osaamaa Bin Laadiin kan bara 2011tti humnoota addaa Ameerikaatiin ajjeefame, haleellaa bara 2001 Fulbaana 11 kan namoota 3,000 ajjeeseef itti gaafatamaadha.
Ilmi isaa Hamzaa Bin Laadiin ammoo Ameerikaafi biyyoota biroorratti halleellaa gooteetta jechuun himatamus, bara 2019tti ji'a Agayyaa keessa haleellaa xiyyaaraatiin ajjeefamusaa gabaasaaleen bahaniiru.
Ilmi mootichaa ibsa miidiyaaleef kennaniin, Wiildar kan kilabicha ramaddii League One irra gara Priimeer Liigiitti akka makamu godhan, kilabicha dhimma kubbaa ilaallaturratti akka hoggananiif nan deggeras jedhan ilmi mootichaakun.
"Wiildar argachuu keenyaaf baay'ee boonna, jedhaniiru Ilmi mooticha Abdallaa. "Qabxiifi akkaataan itti deemaa jirru ofiisaatii ni dubbata."
Wiildar gama isaaniitiin, "fuldurri keenya %100 ifadha. Abbaa qabeenyaa haarawa waliin ega bara 2016 irra jalqabee kan jijjiiraman Ilma mootichaa Abdallaa waliin waggoota sadiif wal qunnamaa akka turan dubbatu.
"Ilaalcha kiyyarraa al lama qofa sodaa kiyya kan ilma mootichaafi Keeviiniif ibse. Yeroo hedduu akkan hojii kiyyaa bilisa ta'ee hojjadhu na dhiisu.
"Rakkoon boordiirraa gara manaajeraatti, manaajera irraa ammoo gara boordiitti dhiyaatu jiraatee milkaa'ina kanarra hin geenyu turre.
Yeroo hundaa yeroon kilabicha hoganuu waan dhugaan dubbadha; garuu milkiin nuti waggoota sadii keessatti argannee waan ani abboota qabeenyaa lamaan irra gargaarsa akka argadhu na godheedha."
Ilmi mootichaa Abdallaan dabalataan akka beeksisanittis soddaan kan intala isaa fuudhu umuriin isaa ganna 26 ta'e Musaad, hogganaa haarawaa kilabichaa ta'a jedhaniiru.
Obbolaan durbaa Sawud Arabiyaa: Niiwuu Yoork laga qarqaratti du'aanii argaman hiibboo ta'ee jira
Yaaliin imala xiyyaaraa dheeraa osoo hin dhaabbatiin taasifame milkaa'e